Ngwaọrụ laser fiber
Pipe tube ịkpụ fiber laser igwe
Ngwa eji eji akwọ osisi fiber laser
CNC Router Router
Advertisement CNC rawụta
ATC CNC rawụta
Marble CNC rawụta
Woodworking CNC rawụta
Metal CNC rawụta
Ngwunye laser CO2
Igwe eji egbu osisi na ịkpụzi CO2
Machinedọ Igwe Ọkpụkpọ Igwe Ọkpụkpọ Iron-Non Iron CO2 Laser
Ngwunye akara nke CO2 Laser
Plasma Ịcha Machine
Olee otú Họrọ The CNC rawụta Machine Spindle?
1. Igwe mgbasa ozi mgbasa ozi: ihe osise a bụ ihe dị nro, ya mere, ike spindle nke igwe mgbasa ozi nwere ike ịdị n'ime 1.5kw-3.0kw. Ọ bụrụ n'ịhọrọ ụzọ a, ị ga-enweta ebumnuche nke ịkpụ na ịchekwa ego. 2. Woodworking osise igwe: The atụ ogho ...GỤKWUO »
Edozi igwe eji agba oji
(1) Gburugburu ebe ọrụ Ihe igwe a na-atụ okwute bụ igwe mechatronics dị elu, nke nwere ụfọdụ ihe achọrọ maka gburugburu ọrụ. ...GỤKWUO »
Olee otú Họrọ Stone CNC rawụta Machine pupụtara? Eduzi ndi n’eji igwe ihe eji acho ihe igwe
Nkume CNC rawụta igwe pupụtara na ndu ndu: 1. Maka acrylic ọnwụ nke nkume osise igwe, otu-ihu gburugburu-egwe ọka cutter na-atụ aro. Ejiri arụmọrụ na-enweghị anwụrụ na-enweghị isi, ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ na arụmọrụ dị eluGỤKWUO »
Na-alụ ọgụ, anyị ga-emeri!
Oge nzipu ozi: Mar-03-2020
Malite na Jenụwarị 2020, ọrịa na-efe efe a na-akpọ "Novel Coronavirus Infection Ex virus Pneumonia" emeela na Wuhan, China. Ọrịa ahụ metụtara n'obi ndị mmadụ n'ụwa niile, n'agbanyeghị ntiwapụ nke ọrịa ahụ, ndị China gbagoro na ala obodo ahụ, na-agbasi mbọ ike ...GỤKWUO »
27, Julaị, 2019, ndị ahịa India na-abịa n’ụlọ ọrụ anyị
Oge nzipu ozi: Jul-30-2019
27, Julaị, 2019, ọ bụ ụbọchị ọkụ ebe a na Jinan China, ndị ahịa India na-abịa eleta ụlọ ọrụ anyị, na-anabata ndị enyi anyị niile. Ndị enyi India bịara na mpaghara CNC router machine Production nke ihe dị ka awa atọ, wee gaa leta ngalaba igwe na-emepụta ihe igwe na CO2 laser.GỤKWUO »
Gini bu igwe CNC router?
Oge nzipu ozi: Mee-28-2019
CNC ROUTER Igwe eji akara ọnụọgụ kọmputa (CNC) bụ ihe eji akpụpụta kọmputa na igwe na - ejikwa kọmputa nwere ihe jikọrọ router na-ejide ya na ya iji wee belata ihe dị iche iche siri ike, dịka osisi, ihe ndị mejupụtara, aluminom, ígwè, plastik, iko, na ụfụfụ.  Ndị na-anya CNC nwere ike ịrụ ọrụ nke ọtụtụ c ...GỤKWUO »
Nwee obi ụtọ na ị na-arụ ọrụ
Oge nzipu ozi: Mee-21-2019
Shandong DADI CNC akụrụngwa Co., Ltd. ka e guzobere na 2014. Ọ bụ ọkachamara emeputa CNC ROUTER na CNC LASER machine.Products na-eji ọtụtụ ebe na: ụlọ ọrụ mgbasa ozi, ụlọ ọrụ osisi, ụlọ ọrụ ụlọ, ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ mkpuchi ụlọ ịchọ mma. na ndị ọzọ ind ...GỤKWUO »
Ntị ka zuo nke laser ọnwụ igwe
Post oge: Aug-03-2018
Na eluigwe na ala were nke laser ọnwụ igwe emewo ka mma ka ndị metal nhazi ụlọ ọrụ. Ọ bụrụ na ị ka na-dazzled site a otutu laser ọnwụ igwe, ị nwere ike ntị ka isi ihe ndị a. 1. ọnwụ àgwà nke laser ọnwụ: dị ka ụfọdụ kitchenware, ụgbọala, ígwè, ngwaike na ndị ọzọ ...GỤKWUO »
Olee ụdị home mma nwere ike laser ọnwụ igwe ike?
The laser n'ilu ọlu usoro bụghị naanị a nkọ "mma" na n'ichepụta ụlọ ọrụ, ma ọbụna ndị ịchọ mma na crafts na anyị na-ahụ n'ebe nile ná ndụ kwa ụbọchị nwere ike iche na laser osise. Ka anyị lee ihe ụdị ezinụlọ uwe anyị nwere ike iru. The ojiji nke laser ...GỤKWUO »
Ngwọta nke laser odide ke ndaeyo
N'oge a, ọ bụ na oge nke Meng Xia oge, mgbe égbè eluigwe enwekwu, na Ugboro mmiri ozuzo na mmiri gburugburu ebe obibi pụrụ n'ụzọ dị mfe ịkpata ndị odide na laser, si otú mbenata arụmọrụ nke laser na nwere ike mebiri emebi. Isi dozie onu nke laser odide? Gịnị s ...GỤKWUO »
Adresị: Room 1102, North Rongsheng Times International Building 6, Quanfu overpass, Licheng District, Jinan obodo, mpaghara ShanDong, China
Tẹ: +86 15688488223
DADI CNC: Ndewo, Nabata ileta weebụsaịtị anyị.
DADI CNC: Enwere m ike inyere gị aka?
Mba, daalụ Nkata Ugbu a